Etu esi ewulite njem nlegharị anya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị? Mission agaghị ekwe omume?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » trending Ugbu a » Etu esi ewulite njem nlegharị anya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị? Mission agaghị ekwe omume?
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Ajụjụ Ọnụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Tourism • trending Ugbu a • WTN
Imezigharị njem Mgbe Covid-19 bụ ajụjụ onye ndụmọdụ njem njem German Max Haberstroh jụrụ.
Ọ na -eche na ọ ga -enweta nkwado siri ike mgbe ọrịa ọjọọ gasịrị bụ isi maka iwughachi ya.
Mmetụta mmekọrịta ọha na eze, gburugburu ebe obibi na akụ na ụba na isi mmalite na ahịa ebumnobi na obodo ha na (ndị nwere ike) ndị ọbịa na ndị ọbịa;
Nyocha njem & njem nlegharị anya, ogo nke ịdị mkpa ya maka ọnọdụ anyị, yana otu esi eme njem nlegharị anya na ngalaba na ụlọ ọrụ metụtara;
Ndozi nke usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị iji bulie Njem njem na njem nlegharị anya dị ka ụlọ ọrụ na -ahụ maka ọrụ, yana irite uru na njem nlegharị anya dịka ngwa ọrụ nkwukọrịta, iji kwalite ụdị nche anwụ na onyonyo nke ebe/ebe na mkpokọta ya - dịka ebe ibi ndụ, ịrụ ọrụ, itinye ego, na njem.
Njem & njem nlegharị anya bụ ụlọ ọrụ raara nye ime ka nrọ mezuo, nke na -ebute ọchịchọ ndị mmadụ n'ụzọ njem efu, na -ekpori ndụ na ntụrụndụ, egwuregwu na njem, nka na ọdịbendị, nghọta ọhụrụ na echiche. Ọ bụ na ihe ndị a abụghị ihe dị mkpa na -eme ka ndụ mmadụ bụrụ ihe bara uru karịa ya? Ya mere, Njem njem na njem nlegharị anya anaghị enweta olu nke mbụ na mpaghara, mpaghara, mba, na mba ụwa niile na-agbachitere ikike mmadụ ma na-agba ọrụ mmadụ ume?
N'ime oge aghụghọ, ịgha ụgha, akụkọ adịgboroja, populism na okwu ịkpọasị nke mebere, njem nlegharị anya na-enye ohere maka imepụta ihe, na-akpali okike na ọmarịcha, nka na ihe pụrụ iche nke ihe nketa ụwa na 'Disney' sitere n'ike mmụọ nsọ. 'ụwa nke abụọ'. Ọ dịghị mkpa ka mmụọ ọjọọ mee ihe ọ bụla: Agbanyeghị, na -eleghara arụrụ aka, njem nlegharị anya na 'ezigbo' - anyị makwaara: izi ezi, ya bụ, mmetụta nke ịbụ onye a na -aghọtaghị, nwekwara ike mezuo na 'eziokwu 'ụwa nke ihe nka nke sitere n'obi - na' nka ', ya mere raara nye ezigbo echiche nke' Ezi, Mara mma na Ezi '.
Agbanyeghị na ekewara n'ime puku ole na ole 'azụ buru ibu' na ọtụtụ nde obere ụlọ ọrụ obere na nke obere (SME) na ụlọ ọrụ ọha, Travel & Tourism na-anya isi na ọ bụ ụlọ ọrụ kacha ibu n'ụwa-nke echiche na-akwado ma na-agba mbọ ije ozi na. na -enye ahụmịhe njem na -atọ ụtọ. Ọzọkwa, njem nlegharị anya na -ele onwe ya anya dị ka ụlọ ọrụ udo nke mbụ. Ọ bụ onye ọ bụla nọ na mpụga mara nke a? Njem njem na njem nlegharị anya na -abịa n'echiche a mara mma?
Ọhụụ nke ịgagharị ụwa kpaliri Thomas Cook ịhazi njem ngwugwu nke mbụ. Ọtụtụ narị afọ ka e mesịrị, ọhụụ nke ime njem n'enweghị ihe mgbochi gafere ókèala ghọrọ vekti nke kpalitere ngagharị iwe Mọnde nke East Germany. Mkpakọrịta na ndị isi ụwa na-ahụ nnwere onwe, 'ozi agaghị ekwe omume' n'ikpeazụ na-eduga n'ihe ọ bụla ma e wezụga ịkwatu ọchịchị ọchịchị Kọmunist na-ada ada na ọmarịcha ọdịda nke mgbidi ahụ! Lee mgbanwe ọ bụ! Otu n'ime ụdị siri ike ikwugharị.
Na nloghachi, agbanyeghị, usoro ochie yiri ka ọ na -apụta ọzọ: N'ezie, anyị agbanweela site na Agha Nzuzo gaa Udo Nzuzo, na -ama nke ọma na nke a abụghị naanị ihe agha. Ọ bụ ihe anyị chọrọ?
Mgbe mgbidi ahụ daa, ohere na ohere dị ka nkwalite oge, dị njikere iwere. Soviet Union etisasịwo, Russia nọ n'ọgba aghara, mana Onye isi ala Yeltsin, onye na -apụnara mmadụ ihe, gosipụtara onwe ya nke ọma iji gbochie mgbagha ọchịchị. Afọ iri ka e mesịrị, onye nọchiri anya Putin, n'ozuzu ha anaghị ewere ya dị ka "onye ochichi onye kwuo uche ya" (n'agbanyeghị nyocha ngwa ngwa Schröder nke Germany), kwuru okwu na German Bundestag wee nwee ọ cheeụ n'ofe akụkụ niile. Emebisịla nkwekọrịta Warsaw, mana NATO, na -achọsi ike ịhapụ ndị Europe ọwụwa anyanwụ site na nrọ ọjọọ 'Russia', were oge site n'egedege ihu wee gbasaa ọwụwa anyanwụ. Russia nwere mmetụta na a kụrụ ya aka, na eleghara anya na -amụbawanye ka ọ bụrụ akụkụ nke Europe. Njikọ aka ọdịda anyanwụ gosipụtara onwe ya ebumnuche agha mana enweghị echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Taa, kama inye anụ ahụ mmụọ mbụ nke njikọta Europe na Russia, ọ ka mma ka anyị lezie anya maka mgbasawanye Russia.
Kedu ohere furu efu na mbido 1990s iji 'mee ka ụwa ọhụrụ nwee obi ike': imepe Russia na Europe na ọdịda anyanwụ wee tufuo ngwa agha niile nke rere ure na usoro mmanya mmanya na -egbu egbu. "NATO anaghị agwụ agwụ" - ọ dị mkpa, ebe ọ bụ na ọ bụ Trump ka ọ na -ekwu? -
Kedụ ohere ndị ndu ọhụụ hụrụ na steeti, gọọmentị na ọkwa azụmaahịa tụfuru iji gosi nlepụ anya n'ihu na ịnụ ọkụ n'obi, na ikwu okwu? Kedu ohere na-adaghị adaba maka Njem njem na njem nlegharị anya, ụlọ ọrụ udo kacha mkpa n'ụwa, ịhapụ ụlọ elu ọkachamara nke ndị nwere ya wee mee ya ọkụ ọkụ nke radieshon zuru ụwa ọnụ: ịmalite ịrịọ arịrịọ na-emekọ ihe ọnụ, na-ekwurịta okwu n'etiti mba dị iche iche nke ndị isi mkpebi. hazie ihe omume ọdịbendị, nyere aka mee ka ntụkwasị obi na ntụkwasị obi sie ike wee ziga ozi siri ike nke Udo site na njem nlegharị anya nye ndị nọ n'ọgba aghara?
Ewoo, ohere ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ụdị a agabigaghị, na echiche ịkpụgharị mgbanwe ka mma ka agọnarịrị ma ọ bụ hapụ ya.
“Na mbụ ka okwu ahụ dị”: A na -agba mbọ n'oge a - mgbe ụfọdụ na -enwe obi abụọ dịka ha nwere, ịkpọgharị aha ndị a maara nke ọma: Yabụ, 'onye ọbịa' dị mfe ka ọ dịkarịa ala kwalitere asụsụ ka ọ bụrụ 'onye njikwa resonance'. Ọ bụrụ na ihe a na -elekwasị anya bụ 'resonance', ndị otu njem na njem nlegharị anya kwesịrị itinye echiche a, na -eme ka nkwalite na nhụsianya ha dịkwuo elu ruo ọkwa nke 'ndị na -eme ka mmekọrịta ọha na eze' karịa, kama idobe ịdị elu ha dị ka nchegbu na -ekwu okwu, na -ahazi onwe ha ka ha na ha biri. bureaucracy kwa ụbọchị na ihe mgbochi nke ụlọ ọrụ ha kewara ekewa.
Nke a abụghị naanị ihe akaebe ọzọ na ụfọdụ mantra nke ndị isi ụlọ ọrụ na -emegide onwe ya: 'ịhapụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na njem nlegharị anya'. Ọ dị mma, ọ nwere ike bụrụ ihe kwere nghọta n'ihi itinye aka na njem nlegharị anya na atumatu ụbọchị niile: Njem nlegharị anya, ka o wee na-eme ihe nke ọma, kwesịrị ịpụ na corsets nke ọchịchị ọha ma nye ya ụdị iwu nkeonwe kama. Agbanyeghị, enwere nnukwu esemokwu ma ọ bụrụ na akwadoro njem nlegharị anya ka ọ bụrụ onye na -eme ihe nkiri 'na mpụga ndọrọ ndọrọ ọchịchị' ma ọlị.
N'ezie, ọha na eze anaghị ahụ UNWTO, WTTC, na ndị otu ndị ọzọ na -eme njem na njem nlegharị anya dị ka 'relays relays' nke Ezi, Mara mma, na Ezi, ndị raara onwe ha nye igosipụta na ime ihe karịrị oke Njem Nleta. n'onwe ya na ihe mejupụtara ya.
Ha kwesịrị ịmalite ime nke a nke ọma, n'ihi ihe ndị na-eme ugbu a n'oge na ihe kpatara ọrịa Covid-19, yana maka ọdachi gburugburu ebe obibi na ọgba aghara ọha. Ọ bụ iwu na ngalaba njem na njem nlegharị anya na-arụkọ ọrụ yana ndị otu egwuregwu mba na mba na-akwado UN 2030 Agenda for Sustainable Development. Agbanyeghị, na-ejikọ ihu ọma niile na ike ọrụ ọnụ, anyị agaghị enwe ike iru ogo 1,5 ogo kacha ebido na 2040, dịka ọmụmaatụ, ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị na Germany na-atụ anya, iji lụso mmetụta griin haus ụwa. Yabụ, ewezuga mbọ anyị na -agba iji gbochie mgbanwe ihu igwe, anyị kwesịrị inye oke anyị itinye ego buru ibu na itinye ego n'ịkọwapụta ụzọ isi bie mgbanwe mgbanwe ihu igwe. Ịchọta ngwọta ga -adị oke mkpa maka ichekwa nnwere onwe, ọdịmma ọha na eze na udo. Ọ bụ ozi agaghị ekwe omume? - Asịkwala na ọ gaghị eme!
Njem & njem nlegharị anya, dị ka ụlọ ọrụ udo nke echere na ọ bụ nọmba otu, enweghị ike iwere onwe ya pụọ ​​na ntinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị-ọ na-eguzo n'etiti ya niile, na ọ kwesịrị ịgbalị ibute ụzọ n'ọdịniihu ebe ọ na-aga, omume ya, na ihe okike ya. , na mmekorita ya na ụlọ ọrụ, otu na ụlọ ọrụ nwere otu echiche, dịka ụlọ akwụkwọ na mahadum, ndị otu na ndị ọrụ ebere, njem/agagharị na mpaghara Renewable Energy, mkpofu ahịhịa, mmiri na njikwa mmiri, nchekwa na nchekwa, iwu obodo… Njem nlegharị anya kwesịrị ịbawanye ibu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya iji nye mgbasa ozi mpaghara na gburugburu ebe obibi nwere mmetụta kachasị elu yana akara ngosi ihe atụ.
Ụbọchị nhicha ụwa nke na -adịbeghị anya, nke a nabatara nke ọma na West na, dị ka 'subbotnik' (n'ezie 'Satọdee' nhicha), maara na Russia na Ọwụwa Anyanwụ Europe, ga -abụrịrị ihe atụ zuru oke ịmalite, dị ka ebumnuche 'mmalite' maka kwa afọ maka njem nlegharị anya nke ụwa Sept 27.
Echiche efu naanị?
Author Max Haberstroh, Onye na -ahụ maka njem nlegharị anya na Germany, onye otu World Tourism Network
Eziokwu Dị Mfe bụ akụkọ Max Haberstroh bipụtara.